General nke Ọnọdụ nke Sale - Rikoooo
General nke Ọnọdụ nke Sale nke Rikoooo.com
Nke a website www.Rikoooo.com bụ ihe onwunwe nke onwe onye na-ngo Bender Erik (dịrị gaba n'ime ebe kwuru na dị ka Rikoooo) onye debara aha ha n'akwụkwọ ụlọ ọrụ dị na 107 chemin n'ọdụ ụgbọ mmiri de n'ọdụ ụgbọ mmiri, 31410 Noé, ịdenyere aha na Trade na Companies Register n'okpuru Siret nọmba 50970657800010 Tel. 05 61 97 39 54. Nzube nke ndị a n'ozuzu usoro na ọnọdụ nke ire bụ kọwaa usoro na ọnọdụ na ọnọdụ n'okpuru nke ahịa n'etiti Rikoooo na ya ahịa na-kwubiri na a website. The nkwado nke icon enyere onye zụrụ ya ịmara na na-ekwenye na ugbu Izugbe ọnọdụ nke ire ga-emekwa apụghị ịgbanwe agbanwe ma definitive nkwenye onwe ya ala on niile ndokwa dị na Izugbe ọnọdụ nke ire.
Nkeji edemede 1 - Nzube na akporo
1.1- Ndị a Izugbe ọnọdụ nke ire imeri ihe ọ bụla ọzọ akwụkwọ nke asịwo, na karịsịa on ọ bụla Izugbe ọnọdụ nke Ịzụ, ma awara awara ma tupu mkparị na nkwekọrịta nke anyị ụlọ ọrụ.
1.2 - Ndị a Izugbe ọnọdụ nke ire metụtara ndị nile na ahịa nke ngwaahịa site anyị ụlọ ọrụ na ya website ma kpọmkwem na nkwekọrịta tupu iji kwetara na-ede n'etiti ndị ọzọ.
1.3 - Ọ bụla ọzọ akwụkwọ nke ka ndị a Izugbe ọnọdụ nke ire na karịsịa depụtara akwụkwọ, prospectuses, mgbasa ozi, ọkwa, bụ naanị indicative, na-abụghị contractual. The foto na ndịna-emeputa ọkọnọ na website nwere nanị indicative na adịghị alụ ibu ọrụ nke na-ere ere.
Nkeji edemede 2 - arịa amamihe
All akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na-ekwu, ihe atụ na ihe oyiyi mepụtagharị na saịtị www.Rikoooo.com na-debeere na ndị na-ekewaghị ekewa onwunwe nke Rikoooo ma ọ bụ ya suppliers na-echebe n'okpuru nwebisiinka na arịa amamihe maka nke ụwa dum na aghụghọ, ụdị, Ikike nchọpụta Kemịkalụ, atụmatụ na n'ozuzu niile akwụkwọ nke ụdị ọ bụla nye ma ọ bụ zitere site Rikoooo na ndị ahịa bụ nanị ihe onwunwe nke Rikoooo ma ọ bụ ya suppliers.
Nkeji edemede 3 - Iwu
3.1 - Products awa maka ire site Rikoooo ndị na-adade on www.Rikoooo.com na onye dị oké mkpa e ji mara na-kọwara ebe a. Dị na Nkeji edemede L. 111-1 nke Consumer Code, nke kwuru na "ihe ọ bụla ọkachamara na-akanyam ngwongwo ma ọ bụ ọrụ ga-, tupu ọgwụgwụ nke nkwekọrịta, ebe ahụ n'ji nọ n'ọnọdụ ga-amarakwa oké mkpa e ji mara ngwongwo ma ọ bụ ọrụ ", The ụlọ ọrụ Rikoooo-enye ohere ahịa, tupu ọ bụla wee a pụrụ isi chọta, iji rịọ arịrịọ ozi ndị ọzọ na ngwaahịa ndị a site na ekwentị ma ọ bụ site email, na nọmba pụtara ná preamble ndị a izugbe ọnọdụ nke ire.
Rikoooo undertakes iji nye ndị ahịa na ihe ọ bụla na ozi ndị ọzọ o nwere ike chọọ inweta ma ọ bụrụ na ọ dịghị atụle ya zuru ezu asian site nkọwa ma e ji mara ngwaahịa na ere na n'elu-e kwuru saịtị.
Otú ọ dị, ọ bụ ibu ọrụ nke onye ahịa iji nyochaa na ngwaahịa nyere iwu ederịta akwụkwọ ozi ya mkpa na aga, ndị ahịa ịbụ nanị ya na-akpata ime nke ngwaahịa na ojiji nke na ọ na-aduak.
3.2 - Automatic ndekọ usoro na-ahụta ka ihe àmà nke ọdịdị, ọdịnaya na ụbọchị nke iji. Rikoooo-egosi nnabata nke ya iji ndị ahịa na e-mail address na ọ ga-ekwurịta okwu. The ire ere ga na-kwubiri mgbe nkwenye nke iji.
Rikoooo mee ikike kagbuo ọ bụla wee si a ahịa Nke na-a esemokwu ndị metụtara ndị ugwo nke a gara aga iji. The ọmụma kwuru site purchaser, mgbe na-ewere iwu, na-akwa ndị ahịa: bụrụ na nke njehie na adreesị onye nnata ahụ nkọwa, na-ere ere nwere ike ghara ẹkenịmde maka na-apụghị ime nke na-anapụta ngwaahịa.
3.3 - Rikoooo mee ikike eme mgbanwe ndị ma ọ bụ mmeli mma na ya chere dị mkpa mgbe ọ bụla ka ya na ngwaahịa, na-enweghị ihe a na-agu n'onye ezi omume site na ndị ahịa, ịjụ nnabata na mee ikike Mgbe e ihichapụ otu n'ime ndị na ngwaahịa na igosi na website, a nhichapụ nwere ike ọ bụla ikpe ziri ezi na akụkụ nke ndị ahịa, ụfọdụ emebi obosara na-. Ọ bụrụ na a ngwaahịa ndị a ga-ehichapụ na ndị ahịa achọghị ahọrọ ọzọ yiri ma ọ bụ yiri ngwaahịa, ya ka a ga-kagbuo ipso jure na ego mere ga-refunded.
Rikoooo si ngwaahịa àjà dị n'ime ịgba nke dị ebuka ma maka ngwaahịa bụghị echekwara na Rikoooo ama ogige, n'okpuru nnweta ya suppliers, nke bụ ndị karịrị ike Rikoooo. Bụrụ na nke unavailability nke ngwaahịa mgbe ịtụkwasị wee, Rikoooo undertakes na-agwa ndị ahịa ozugbo o kwere omume, site mail, Internet ma ọ bụ e-mail. Ndị ahịa pụrụ mgbe ahụ kagbuo ya iji na Rikoooo ga nkwụghachi ya, ozugbo o kwere omume, ọ bụla nchikota nke na a pụrụ anakọtara site na ndị ahịa.
Ọ bụla unavailability nke ngwaahịa, ihe ụfọdụ mere ka nwere ike a n'ụzọ ọ bụla nye ịrị elu na ugwo site Rikoooo nke ụfọdụ emebi obosara na ọdịmma ma ọ bụ ụfọdụ mmefu nke ọ bụla ọdịdị bụla.
Nkeji edemede 4 - deliveries
Nnyefe nke intangible akpan owo na-mere ozugbo nkwado nke ụgwọ ahụ.
Nkeji edemede 5 - Price
The sales ahịa nke ngwaahịa na ofu site tarifu na ike n'ụbọchị ha nyefee nke iji. Rikoooo mee ikike gbanwee ya ahịa n'oge ọ bụla na bụrụ na nke mgbanwe nke ahịa, ndị ahịa na ọdabara ga-abụ ndị a pụrụ isi kwuo na ụbọchị nke n'ikuku nke iji.
The ahịa na ahịa depụtara na www.rikoooo.com na-hotara na euro na-agụnye VAT. Ha bụ net nke ọ bụla discount na ewepu nnyefe ma ọ bụ mbupu ụgwọ.
Nkeji edemede 6 - Ịkwụ Ụgwọ
6.1 - Ịkwụ Ụgwọ
Ugwo nke ngwaahịa nyere iwu na saịtị www.rikoooo.com a na-eme ego na iji site Paypal ma ọ bụ 2Checkout (CB) ma ọ bụ Lelee.
6.2 - Non-payment / Njide nke aha nkebiahiri
Ọ bụla merenụ nke ịkwụ ụgwọ ga-ikike Rikoooo kwụsịtụ ogbugbu nke ihe nile pụtara ìhè iwu nke ndị ahịa, na-enweghị nke ikpeazụ ịbụ ike na-ekwu na ọ bụla emebi obosara ma ọ bụ indemnities nke ụdị ọ bụla. Ke adianade do, onye na-azụ ga ikwughachiugwo Rikoooo niile akwụ ụgwọ niile metere ke mgbake nke United Kingdom echekwara, gụnyere akpụ nchikota indemnity nke 10% nke mgbakọ na mwepụ ndị ruru, n'enweghị ajọ mbunobi ọ bụla ọzọ emebi obosara na mmasị.
Mgbe ngwaahịa na ere na-adịghị akwụ ụgwọ na jupụtara na oge nke nnyefe, Rikoooo mee onwunwe ruo mgbe zuru ugwo nke isi price na kwekọrọ ekwekọ ngwa mma, ugwo n'ime a pụtara nkebiahiri-aghọta site collection Price site Rikoooo. Bụrụ na nke ndabere 8 ụbọchị mgbe a akwụkwọ ozi nke iwu mara zitere edebanyere akwụkwọ ozi ekwupụta nnata na agaghị nke ọma, ire ga-kagbuo dị ka nke ziri ma ọ bụrụ na ezi yiri ka Rikoooo-enweghị ajọ mbunobi ọ bụla ọzọ mebiri na mmasị.
Nkeji edemede 7 - Nkwa na nke o na ezo ntụpọ
Rikoooo jide n'aka na ya na ngwaahịa soro French na European ụkpụrụ na ike banyere ha, dị ka ha na-adị.
Nkeji edemede 8 - Nominative ọmụma
Rikoooo undertakes bụghị na-ekwurịta okwu na ndị ọzọ ndị ọmụma ebute site ná na ya site na ahịa, nke dị nzuzo. Nke a na ozi ga na-eji ndị Rikoooo esịtidem ọrụ iji hazie ihe ndị ahịa si dị. Na dị na Data Nchedo Act of 6 January 1978, ndị ahịa nwere ikike nke ohere, rectification na-emegide onwe onye data banyere ya. Iji mee nke a, ọ bụ zuru ezu itinye online ma ọ bụ site mail, ikwu na aha, aha mbụ, adreesị na, ọ bụrụ na o kwere omume, ndị ahịa akwụkwọ.
Nkeji edemede 9 - ike ka ike
Rikoooo nwere ike a napụla niile ma ọ bụ akụkụ nke ya ọrụ na-enweghị ike na-ekwu na ọ bụla emebi obosara na ya na ihe omume nke unforeseeable ọnọdụ ma ọ bụ ike ka ike na-egbochi ma ọ bụ egbu oge ebighị nke ngwaahịa ma ọ bụ nke ụfọdụ n'ime ha ọcha.
Ọ bụrụ na ihe omume na-adịru ihe karịrị ụbọchị iri atọ site na ụbọchị nke ya omume, na nkwekọrịta nke ire mechiri site anyị ụlọ ọrụ na ndị ahịa nwere ike kwụsị ịdị irè ya kasị uchu akụkụ, na-enweghị ọ bụla nke ọzọ nke pụrụ ikwu na emebi obosara. Nke a kagbuo ga-mmetụta na ụbọchị nke mbụ ngosi nke e debara aha akwụkwọ ozi AR n'ịkatọ ihe si nkwekọrịta nke ire.
Nkeji edemede 10 - ikike
Awara awara nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ, ndị Commercial Court nke anyị n'isi ụlọ ọrụ ga-nanị maka ihe ọ bụla esemokwu ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla na obodo metụtara guzobe, egbu ma ọ bụ nkọwa nke ndị a Izugbe ọnọdụ nke ire na niile arụmọrụ Sales nke Rikoooo ngwaahịa. Ndị a Izugbe ọnọdụ nke ire na niile ahịa mere site Rikoooo bụ isiokwu French iwu.
Nkeji edemede 11 - waiver
Eziokwu ahụ bụ na anyị ụlọ ọrụ adịghị, mgbe ọ bụla e nyere n'oge, inweta onwe ya nke ọ bụla nke nkebi ahịrịokwu hereof, ike waive nri na-adabere na ndị a nkebi ahịrịokwu ke ukperedem ụbọchị.